तपाइको नाम कुन अक्षरबाट सुरु भएको हो ? अक्षरबाट हेर्नुस स्वभाब भाग्य र भबिस्य ! « Onlinetvnepal.com
Published : 16 May, 2019 2:32 pm
प्राय मानिस आफ्नो नाम सधै प्यारो मान्‍ने गरिन्छ।उनीहरु आफ्नो नामको अक्षरलाई समेत बढी बढावा दिने गरेका छन्। प्राचीन कालमा पनि मानिसले नामकैको कारणबाट चुनौतीपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। तर संसारमा ज्योतिष बिज्ञानले मानिसको नामबाट मनोबिज्ञान पढ्ने पद्धतिको विकास गरिसकेको छ। मानिसले अब आफ्नो नामको अक्षरबाट स्वभाव थाहा पाउन सक्छन्।